आईसीपी नाकाबाट नयाँ सवारी साधनको आयातमा वृद्धि « Lokpath
२०७५, ७ कार्तिक बुधबार ११:१९
आईसीपी नाकाबाट नयाँ सवारी साधनको आयातमा वृद्धि
प्रकाशित मिति : २०७५, ७ कार्तिक बुधबार ११:१९
वीरगन्ज । वीरगन्जको एकीकृत भन्सार (आईसीपी) नाकाबाट नयाँ सवारी साधनको आयात बढेको छ ।
चाडपर्वका कारण जिप, कार, भ्यानलगायत सवारी साधनको आयात बढेको हो । वीरगन्ज र आईसीपी भन्सार नाकाबाट नयाँ सवारी साधनको आयात बढेको छ । चाडपर्वका कारण जिप, कार, भ्यानलगायत सवारी साधनको आयात बढेको हो ।
दशैँ, तिहार, छठ जस्ता प्रमुख चाडपर्वमा सवारी साधनको खरिद बिक्री बढी हुने भएकाले पनि यो सिजनमा नयाँ सवारी साधनको आयात तुलनात्मक रूपमा बढ्ने गरेको छ । भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउन १ देखि असोज १५ को तुलनामा यस वर्षको यसै अवधिमा सवारी साधनको आयात उत्साहजनक रूपमा बढेको हो ।
कार्यालयका प्रवक्ता सन्तोष यादवका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा यो नाकाबाट ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरका ५१ हजार ६ सय ८० सवारी साधन आयात भएका छन् । जसबाट १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । वीरगन्ज नाका सवारी साधन आयात हुने मुलुककै प्रमुख नाका हो ।
समुद्री मार्गबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाहसम्म ल्याइने तेस्रो मुलुकबाट आयातित सवारी साधनदेखि भारतमै निर्मित सवारी साधन पनि भौगोलिक निकटता र यहाँबाट राजधानी लग्न छोटो दूरी पर्ने भएकाले पनि आयातकर्ताले सवारी साधन आयातका लागि वीरगन्ज नाका नै रुचाउँने गरेका छन् । वर्षेनी यो नाकाबाट सवारी साधनको आयात क्रमश बढ्दै गएको भन्सार तथ्यांकले पनि देखाएको छ ।
कोरोना प्रभाव : गत वर्षभन्दा २ सय ५० केजी बढी सुन आयात, बैंकमा थुप्रिन्छ मात्रै !
कमला अर्याल/ काठमाडौं – पछिल्लो समय सुनको आयातमा वृद्धि भएको देखिएको छ ।
३ वर्षमा बढे १० हजार मतदाता
प्रहरीका १८ एसएसपीहरुको सरुवा तथा पदस्थापन, को कहाँ ? हेर्नुहोस्…